Fepetra sy fepetra ary politika momba ny tsiambaratelo - Countdown amin'ny fanjakana
Fifanarahana mahakasika ny fampiasana an'ity tranokala ity
Ity tranonkala Internet ity dia omena ho fitaovam-pifandraisana, fanabeazana, fanentanam-panahy ary fampahalalana. Ity tranonkala ity dia fananana sy ampiasain'ny Countdown to the Kingdom.
Ny fitaovana rehetra ao amin'ity tranokala ity, anisan'izany fa tsy voafetra ihany, ny atiny, ny fanoratana, ny sary, ny sary ary ny kaody sy solosaina ao amin'ny solosaina, dia noforonin'ny Countdown to the Kingdom na avy amin'ny antoko fahatelo.
Azonao atao ny misintona fitaovana avy amin'ity tranokala ity ho an'ny fampiasana anao manokana, tsy vola madinika, raha toa ka voahazona ireo zon'ny mpamorona rehetra sy ny fananana ara-tsaina hafa mifandraika amin'ny fitaovana alaina. Tsy misy an'ity resaka ity fa azo raisina ao amin'ny solosaina afa-tsy amin'ny fampiasana manokana sy tsy an'olon-tsotra.
Mety tsy azonao atao ny manova, mandika, mamerina, mamerina, mandefa, mamerina, mamindra, mizara, mamerina, mamerina amin'ny fomba rehetra na inona na inona fitaovana avy amin'ity tranokala ity, anisan'izany, fa tsy voafetra ho an'ny, code, software, lahatsoratra, sary, logo, video ary / na audio, amin'ny alàlan'ny antonony misy na mbola noforonina.
Fameperana manokana momba ny fampiasana fitaovana
Ianao dia mila manaja ny marika rehetra, ny zotram-bidy, ny marika serivisy, ny logos ary ny patantitra rehetra amin'ny fananana ara-tsaina ao amin'ity tranokala ity, na haingam-bokatra, zotram-pahefana, varotra, logos ary paty na marika ho an'ny Countdown to the Kingdom, na nahazo alalana avy amin'ny antoko fahatelo. Mety tsy azonao ampiasaina amin'ireto logos, marika, servicemarks, patent, na votoatin'ny tranokala ity raha tsy misy fanekena an-tsoratra amin'ny Countdown to the Kingdom.
Zo nomena tamin'ny haino aman-jery an'ny fandriam-pahalemana
Raha mandefa na mampiditra hafatra, fanehoan-kevitra, data, ary / na soso-kevitra azo ampiharina amin'ny Countdown to the Kingdom na iray amin'ireo serivisy na vokatra izahay, dia omenao ny zon'ny fananana ara-tsaina rehetra ao amin'io resaka io mba hanisana ny Fanjakana. Ny fitaovana dia raisina ho tsy misy mpino, ary ny Countdown to the Kingdom dia mety hampiasa hevitra, hevitra ary fananana ara-tsaina amin'ny fomba rehetra izay safidiny, tafiditra ao, fa tsy voafetra ho an'ny famerenana, ny fampahafantarana ary ny famoahana azy amin'ny alàlan'ny sehatra misy ankehitriny na mbola ho avy. namorona.
Ny zo nomena dia maimaim-poana, tsy maharitra, tsy misy voakaly, ary tsy voarindra, ary tafiditra ao, fa tsy voafetra, ny fahazoan-dàlana, ny fivarotana, ny zon'ny mpamorona, ny marika, ny servisy ary ny patantitra.
Politika momba ny tsiambaratelo sy lisitry
Raha manome ny adiresy imailakao amin'ny Count-to the Kingdom ianao raha hanao sonia ho an'ny pejin'ny Fanjakany amin'ny Fanjakan'ny Fanjakana, ny fampiantsoana ny Countdown to the Kingdom dia handefa mailaka anao fotsiny. Ny politikan'ny fanetrehana ny Fanjakana dia tsy ny adiresy mailakao na ny mombamomba anao amin'ireo antoko fahatelo.
Ny fanisana any amin'ny Fanjakana dia mety hanome rohy mankany amin'ireo vohikalan'ny antoko fahatelo, na koa manonona tranonkala Internet izay tantanan'ny antoko fahatelo. Rehefa mampiasa ity tranokala ity ianao na tranokala misy mifandraika na voalaza ato amin'ity tranokala ity, dia atahoranao manokana ianao. Ny fanetrehana ny Fanjakana dia tsy mandeha na mifehy ireo tranokala fahatelo ireo, ary noho izany dia tsy manome alalana na ampahafantarina momba ny fitaovana rehetra hita ao amin'ireny tranokala fahatelo izany.
Ny fanetrehana ny Fanjakana dia tsy manome antoka fa tsy ho tapaka na tsy misy hadisoana io tranonkala io na ny singa ao aminy na ny asany. Ny fanisana ny Fanjakana dia tsy manome antoka fa tsy misy otrikaretina na singa manimba ny tranokala na ity tranonkala na tranokala mifandray ity tranokala ity.
Tsy tokony hisy na inona na inona ifandraisany amin'ny fikaonan'ny Countdown to the Kingdom, na ny antoko fahatelo izay nanampy tamin'ny famoronana, hamoahana, hanaterana, na hampandehanana ity tranokala ity, ho tompon'antoka amin'ny fahavoazana mivantana, tsy mivantana, tsy ampoizina, manokana, na vokatra azo avy amin'ny fampiasana , na ny tsy fahaizana mampiasa ny Countdown amin'ny tranokalan'ny Fanjakana na ny singa ao aminy, noho ny antony rehetra, anisan'izany ny tsy miraharaha. Amin'ny fampiasana an'ity tranokala ity dia ekenao sy ekena fa ny Countdown to the Kingdom dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fitondran-tena na inona na inona ataon'ny mpampiasa. Amin'ny fampiasana an'ity tranokala ity dia manaiky sy manaiky ny fepetra rehetra an'ity fifanarahana ity ianao.
Raha toa ka tsy mitombina ny fandaharana an'ity fifanarahana ity, dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fepetra izay azo atokisana raha tsy misy ilana azy io.
Ity Fifanarahana ity dia hifehezana sy hampiharina araka ny lalànan'ny Fanjakana California, ary ny toerana ho an'ny mety ho fampiharana rehetra dia ny Sacramento County, Kalifornia.